bff - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Toy ny fitsipika dia manomboka mianatra ireo ankizy malalantsika rehefa manodidina ny roa ka hatramin'ny telo taona izy ireo. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny finamanana malefaka voalohany dia mivoatra aorian'ny dingana familiarization voalohany.
Momba ny finamanana
Ary lehibe indrindra ny tantara an-tsehatra rehefa miady hevitra momba izany ny ankizy kely. Avy eo dia mirodana matetika ny tontolo iray.
Fiarahana amin'ny ankizy
Fa na dia amin'ny ankamaroan'ny tranga aza dia maty haingana be ny afo ary lasa fo sy fanahy indray ianao.
Miaraka amin'ny vintana kely dia ho tafavoaka velona amin'ny akanin-jaza ianao ary avy eo handeha any am-pianarana. Mazava ho azy, ny zanatsika dia manohy mivoatra hatrany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Na izany dia miteraka torimaso sasany amin'ny finamanana na manamafy im-betsaka izy ireo. Miara-manao sekolim-pianarana ianao, mandany ny tolakandro ary mety hiaraka ny faran'ny herinandro. Rehefa mandeha tsara ny raharaha dia miara-mandany ny fialantsasatra izy ireo satria angamba na ny ray aman-dreniny aza mpinamana.
Matetika ny ankizy dia mivoatra amin'ny fomba hafa any am-pianarana, mety hitranga any amin'ny sekoly hafa aorian'ny sekoly ambaratonga voalohany. Matetika ny lisea dia mametraka fisakaizana efa ela. Satria ny fitiavan'ny namana iray voalohany dia mitarika fialonana kely amin'ilay namana iray hafa satria tsy afaka mandany fotoana be loatra ianao miaraka. "Fiaraha-miasa amin'ny zanatsika" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 5. Febroary 2021 5. Febroary 2021 Sokajy fampianaranaKeywords mpinamana be, namana tsara indrindra mandrakizay, bff, namana, finamanana, Fisakaizanan'ny ankizy, Sakaizan'ny ankizyLeave a Comment amin'ny finamanana amin'ireo zanatsika